बजेटले नाग्चेनाग्ला नाकालाई छोएन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
बजेटले नाग्चेनाग्ला नाकालाई छोएन
जेष्ठ २०, २०७५ राजबहादुर शाही
मुगु — तिब्बत जोड्ने नाक्चेनाग्ला नाकाका लागि आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले नाका खोल्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट नछुट्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नाक्चेनाग्ला नाकालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनको क्रममा रारा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले समेत सम्बोधनका क्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मुगुको नाका सबैभन्दा छोटो भएकाले पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । ‘जिल्लावासीको पटक–पटकको मागलाई सुनुवाइ नगरी उत्तरी नाकालाई ओझेलमा पार्न खोजियो,’ उनले भने, ‘बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै मुगुका सबै सांसदलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।’
पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले तिब्बत जोड्ने नाका ओझेलमा परेको स्थानीय सञ्चारकर्मी नृपेन्द्रबहादुर मल्लले बताए । उनले हरेक वर्ष डेढ/दुई मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेकाले निर्माणमा समस्या भएको जनाए । रकम बर्सेनि विनियोजन हुने गरे पनि ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
२०६८ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको ८५ किलोमिटर लामो सडकको अहिलेसम्म १७ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोलिएको सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अझै ६८ किलोमिटर बाँकी रहेको छ ।मुगुको उत्तरी नाका सञ्चालनका लागि पटक–पटक माग गरिए पनि बेवास्ता गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य गोपाल बमले बताए । उत्तरी नाकाको सडक निर्माणलाई गति दिन नाक्चेनाग्ला सडक निर्माण परियोजना स्थापना गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत वर्ष स्थापना गरिएको उक्त परियोजनाको कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेको छैन । परियोजनाले सरकारलाई सडक निर्माणका लागि २६ करोड बजेट माग गरेको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:४९
जिल्ला अस्पतालमै छैन औषधि
जेष्ठ १५, २०७५ राजबहादुर शाही
मुगु — गर्मीयामको सुरुवातसँगै झाडापखालाका बिरामी बढे पनि जिल्ला अस्पतालमा औषधि अभाव छ । चिकित्सकले ‘प्रेस्किप्सन’ लेखेर बिरामीलाई क्लिनिकमा पठाउन थालेका छन् ।
छायानाथ रारा नगरपालिकाले खरिद गरिदिएको तीन लाख मूल्यको औषधि सकिएपछि बिरामीलाई क्लिनिकमा पठाउन थालिएको हो ।
‘स्टोरमा औषधिको स्टक सकिँदै गएको छ,’ जिल्ला अस्पतालका डा. ज्ञानेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट आएको औषधिले जेनतेन काम चलाइरहेका छौं ।’ उनले स्थानीय तहबाट पर्याप्त रकम विनियोजन नहुँदा औषधि अभाव भएको बताए ।
सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा समेत औषधि अभाव छ । खत्याड गाउँपालिकाको रातापानीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नहुँदा उपचारमा समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । मौसम परिवर्तनसँगै झाडापखाला र ज्वरोका बिरामी बढे पनि औषधि पुर्‍याउन कठिनाइ भएको सिनियर अहेब गोविन्द भण्डारीले जनाए । खत्याड गाउँपालिकामा गत पुस/माघमा भाइरल रुघाखोकी फैलिएर १८ जनाको ज्यान गएको थियो । महामारी फैलिन सक्ने जोखिम भए पनि सतर्कता नअपनाइएको स्थानीयको गुनासो छ ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ कोटिलाका काजी कुमालले छोरा झाडाले थलिएपछि बोकेर जिल्ला अस्पताल पुर्‍याए । ‘अहिले गाउँमा बिरामीको संख्या बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्थाका बिरामीले घरेलु उपचार गर्ने र नजिकका मेडिकलमा उपचार गराउने गरेका छन् ।’ उनले गम्भीर समस्या भएका बिरामीमात्र जिल्ला अस्पताल जाने गरेको बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र वृद्धलाई झाडापखालाको समस्या देखिएको छ । वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, छिनछिनमा पखाला लाग्ने र ज्वरो आउने जस्ता लक्षणले बिरामी थलिएको स्थानीयको भनाइ छ । मौसम परिवर्तन, फोहोर खानेकुरा र दूषित पानीका कारण झाडापखाला देखिएको डा. श्रेष्ठले जनाए । ‘जिल्ला अस्पतालमा एक दिनमा ६० देखि ७० जना झाडापखालाका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
रुगा, रोवा, पिना र कोटिला मन्दुलगायत गाउँका बिरामी बढी आउने गरेका छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङका स्वास्थ्यकर्मीलाई रोग नियन्त्रणका लागि सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिक गर्मी बढेको छ । गमगढी हावापानी मापन केन्द्रका अनुसार गमगढीको तापक्रम ३२ डिग्री सेन्टिग्रेड छ । गर्मीका कारण दिउँसो हिंड्डुल गर्न समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
रेबिजविरुद्धको सुई अभाव
जिल्ला अस्पतालमा रेबिजविरुद्ध लगाइने सुई नहुँदा बौलाहा कुकुरले टोकेका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । जिल्लामा १५ दिनयता करिब १२ जनालाई बौलाहा कुकुरले टोकेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । भ्याक्सिन अभावमा उनीहरू सुई लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा पनि रेबिजविरुद्धको सुई नभएपछि बौलाहा कुकुरलाई लगाउन सकिएको छैन । बिरामीहरू रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन सुर्खेत, नेपालगन्ज र जुम्ला जान बाध्य छन् । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा भ्याक्सिनको माग गरिए पनि आइनसकेको डा. श्रेष्ठले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०७:३६
पर्यटकले ढाकियो अन्नपूर्ण पदमार्ग
नयाँ प्रविधिले बढ्यो उत्पादन
रामेछाप विमानस्थलमा लुक्लाका लागि चाप
चिया प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया कमजोरी
७ सय हेक्टरमा बाला पसाएन
गरिमा धान बीउले किसानलाई धोका, फौजी कीराको दु:ख थपियो